आफ्नो हातमा एक topiary कसरी बनाउने। मास्टर वर्ग
भित्री सजावट, आराम र न्यानोपन को माहौल भर्न भनेर विभिन्न रोचक वस्तुहरु। यी वस्तुहरूको एक topiary, वा आनन्द को रूख हो। यो रोचक संरचना सधैं ध्यान आकर्षित गरेको छ र झन् हाम्रो देश needlewomen लोकप्रिय बन्दैछ। एक topiary कसरी बनाउने आफ्नो हातमा? यो भन्दा यो पहिलो नजर मा देखिन्छ धेरै सजिलो छ।
Topiary छ झुकेको राउन्ड आकार क्रून छोटो बैरल एउटा सानो रूख छ। यो सामान्यतया मोती र धनुष संग रिबन र मुद्दा संग सजाया छ। विभिन्न बनावट को सामाग्री को गरे Crohn, सबै मास्टर को कल्पना मा निर्भर गर्दछ। यो खोल पिस्ता अनाज हुन सक्छ, कफी को, फूल विभिन्न सामाग्री र थप।
एक कसरी बनाउने मा विस्तृत निर्देशनहरू लागि आफ्नो हातले topiary, तपाईं कला र बुनाइ समर्पित कुनै पनि विषय मंच मा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं हेर्न र चरण निर्देशन द्वारा चरण संग भिडियो ट्यूटोरियल तपाईं आफैलाई त्यस्तो सौन्दर्य सिर्जना गर्न मद्दत गर्न। Topiary - यो एक विशेष रूख प्रतिलिपि छैन, तर भित्री को विशुद्ध सजावटी तत्त्व मात्र कोठा सजावट रूपमा कार्य।
काम मुकुट सुरु गर्नुपर्छ। जो अक्सर एक राउन्ड आकार छ यसको भित्री लागि, तपाईं सानो प्लास्टिक बल, plasticine, crumpled कागज, फोम वा कुनै पनि यस्तै सामाग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कसरी आफ्नो हातमा एक topiary बनाउन र बच्चा रचनात्मक प्रक्रिया पनि कठिन आकर्षित गर्न सक्दैन। तर सुरु गर्न, यो एक सरल उत्पादन भिन्न हुनुपर्छ।
पिस्ता को गोले देखि आनन्द रूख उत्पादन। plasticine एक बल अप रोल। यो खाली मुकुट हुनेछ। ट्रंक लागि एक सरल sprig औसत व्यास प्रयोग गर्नेछ। उनको सरल सुतली, को अन्त्य मा बन्धन गोंद swathes। Plasticine मनका शाखा लगाउनुहुन्छ र आफ्नो convex पक्ष बाहिरी सामना भइरहेको, पिस्ता को गोले गर्न फँस। तिमी धेरै ध्यान दिएर काम भने त कसरी, सुन्दर शिल्प हुन सक्छ बनाउन अंतराल सकेसम्म सानो हो भनेर, प्रत्येक अन्य तिनीहरूलाई धेरै नजिक संलग्न।
पट, कप, जार वा यस्तै केही - सामान्यतया एक कन्टेनर मा स्थित topiary। स्वाभाविक, यो अनुसार उपायहरु संग सजाया छ। एक पट मा एक रूख अडिग गर्न, तपाईं बालुवा, grits प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मुकुट हल्का सामाग्री बनेको छ भने मात्र तर।
हाम्रो मामला मा उहाँले धेरै चाँडै grasped, solidifies र रूपमा दृढ सम्पूर्ण संरचना धारण, प्लास्टर लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो तयार मिश्रण रूख आफैलाई गरे राखिएको र प्रतीक्षा यो dries सम्म थियो। यो आधा एक घण्टा भन्दा कम लाग्छ। मुख्य काम यो आफ्नै हातले आनन्द को रूख सजाउनु मात्र रहन्छ, गरेको छ, फोटो उदाहरणका लागि, फेरि, पत्रिका वा इन्टरनेट को विशाल expanses मा पाउन सकिन्छ।
हामी सिर्फ सुन्दर कागज वा कपडा को एक पट पेस्ट गर्नुहोस्। को सिलखडी लुकाउन सेतो भित्र ठूलो मोती पोख्नुहोस्। मुकुट र ट्रंक रूखहरू जंक्शन एक विस्तृत सजाउनु साटन रिबन, उनको धनु गाँसिएको। तपाईं इच्छित अन्य सजावटी तत्व थप्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले, आफ्नो हातले एक topiary कसरी बनाउने यो सानो familiarity, सामान्य मदत, यो उदाहरण मा सञ्चालनको सम्पूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत। आशा छ, यो मास्टर वर्ग मार्फत, तपाईंले आफ्नो पहिलो काम सिर्जना गर्नेछ, धेरै अन्य सुन्दर topiary पछि!
आफ्नो हातले डेनिम झोला: छिटो र सजिलो
तकिया-बिरालो: ढाँचा र निर्माण प्रविधि
के सोख को प्रकार
Beadwork तस्वीर वा चमक चमत्कार
एक पोशाक, "दानव उच्च" आफ्नै हातले कसरी सी गर्न। "दानव उच्च" र सामान लागि कार्निभल वेशभूषा
सरल बिन्दु-चित्रित। उपकरण
ब्रान्ड: एक व्याख्यात्मक शब्दकोश को अर्थ
लुडविग वैन Beethoven काम गर्दछ
टर्की मा समुद्र तट छुट्टी। BELEK
मासु बिना आलु casserole। घर लागि व्यञ्जनहरु
Lanolin क्रीम र अनुहार मास्क - निश्चिन्त!
स्याउ संग कोमल र नरम स्पन्जले केक: multivarka मा नुस्खा
आफ्नो हातले स्याउ बगिरहेको कसरी गर्न?
Niqab: यो के हो? विवरण, फोटो
पलायन के हो? शब्द को अर्थ "उम्कन"
केवल सबै भन्दा राम्रो सना स्मोलेन्स्क